အပူခံနိုင်ရည်ရှိသော Epoxy မှအကောင်းဆုံး အပူခံနိုင်ရည်ရှိသော Epoxy မှထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူ၊
Soar Technology Co., Ltd ၏ဦးဆောင်ထုတ်လုပ်သူ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းနှင့်တင်ပို့သူဖြစ်ပါသည် အပူခံနိုင်ရည်ရှိသော Epoxy in Taiwan သောဈေးကွက်တွင်အတွေ့အကြုံနှစ်ပေါင်းရှိခြင်း, ကျွန်တော်တို့ရဲ့လေးစားရောင်းချသူအခြေစိုက်စခန်းထံမှဖြစ်ပြီးရရှိလာသောကြောင်းတန်းမြင့်ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းကို အသုံးပြု. စီစဉ်ထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်တယ်။ စံမျက်နှာစာများအတွက်သူတို့ကိုကုန်ထုတ်လုပ်မှုအပြင်, ငါတို့သည်လည်းသူတို့ရဲ့သီးခြားလိုအပ်ချက်များအတိုင်းထိုထုတ်ကုန်ကို Customize option ပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်ပူဇော်ရမည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်များကိုအလွန်သင့်လျော်သောစျေးနှုန်းဖြင့်ရရှိနိုင်ပါသည်။
ပျံဝဲ-EP-2007-8190-မြင့်မားသောအပူချိန်ပတ်ဝန်းကျင်များအတွက်တီထွင်ထားတဲ့ epoxy ဗဓေလသစ်ကော်.အဆိုပါစေးစနစ်ကိုင်တွယ်ရန်လွယ်ကူသည်နှင့်အမျိုးမျိုးသောပစ္စည်းများမှအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ကော်ဂုဏ်သတ္တိများရှိပါတယ်.ပျံဝဲ-EP-2007-8190 တွင်အထူးမော်လီကျူးဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ထားခြင်းကြောင့်၎င်းသည်တင်းကျပ်သောလက်ဝါးကပ်တိုင်ကွန်ယက်ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်-လင့်များ.မာကြောသောပစ္စည်းများသည်ပုံပျက်သောအပူချိန်မြင့်မားသည်,မြင့်မားသောအပူချိန်တည်ငြိမ်မှုနှင့်အစိုဓာတ်ကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်.ဖြည့်စွက်ကာ,ပျံဝဲ-EP-2007-8190 သည်အခြားဘုံ amine ကုသသော epoxy resins များထက်မြင့်မားသောအပူချိန်တွင်နှောင်ကြိုးခိုင်မာမှုနှုန်းကိုမြင့်မားစေသည်.ပျောက်ကင်းသွားသည်-EP-2007-8190 တွင်မြင့်မားသောအပူပုံပျက်အပူချိန်ရှိသည်,အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ဓာတုခံနိုင်ရည်ရှိသည်,မြင့်မားသောအပူချိန်တွင်ပင်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဂုဏ်သတ္တိများကိုထိန်းသိမ်းနိုင်သည်.SOAR ၏ကုသမှုအခြေအနေများ-EP-2007-8190 သည်အချိန်နှင့်မုန့်ဖုတ်အပူချိန်တို့နှင့်သက်ဆိုင်သည်.မုန့်ဖုတ်အပူချိန်ပိုမိုမြင့်မား,လိုအပ်သည်တိုတောင်းမုန့်ဖုတ်အချိန်.မြင့်မားသောအပူချိန်ကုသပြီးနောက်,အဆိုပါဗဓေလသစ်ကိုအကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်မြင့်မားသောအပူချိန်တည်ငြိမ်မှုရရှိနိုင်သည်.
ပျံဝဲ-EP-2007-8190 lamination အတွက်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်,ဆေးထိုးမှို,ပုံသွန်း,အပေါ်ယံပိုင်းနှင့်ကော်,နှင့်လျှပ်စစ်သံလိုက်၌တည်၏,အီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းများ,လေကြောင်း,မော်တော်ကားနှင့်အပန်းဖြေလယ်ကွင်း.
ပျံဝဲ-EP-2007-8190 သည် 2002 နှင့်ကိုက်ညီသည်/95 ECRoHS စည်းမျဉ်းများ.
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.probe-needles.com/my/heat-resistant-epoxy.html
အကောင်းဆုံး အပူခံနိုင်ရည်ရှိသော Epoxy ကိုရှာဖွေရန်နှင့် ၀ ယ်ရန်၊ သင်သည် အပူခံနိုင်ရည်ရှိသော Epoxy ထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းဝယ်သူနှင့်စက်ရုံမှဖြန့်ဖြူးသူများ၏အမြင့်ဆုံးအရည်အသွေးကိုသိရန်လိုအပ်သည်